शेखर गोल्छा | गृहपृष्ठ
Home यातायात शेखर गोल्छा
कार्यकारी निर्देशक, हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालि
नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बलको सम्भावना छ
अहिले मोटरसाइकलको बजार घटेको म मान्दिनँ । २ वर्षअघि रियल इस्टेटका कारण नेपालको अटो व्यवसाय उच्च थियो । त्यो समयलाई हेर्दा भने अहिलेको बजार पक्कै घटेको हो । तर, विगत १० वर्षदेखिको मोटरसाइकलको विक्रीदर हेर्दा भने निरन्तर बढेको नै छ ।
मोटरसाइकलको नेपाली बजार कस्तो छ ?
नेपालमा अहिले लाखौंको सङ्ख्यामा मोटरसाइकल गुडिरहेका छन् । विगत १० वर्षको समयलाई हेर्ने हो भने मोटरसाइकलले नेपालमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । केही वर्षअघिसम्म शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित मोटरसाइकल अहिले नेपालका ७३ जिल्लामा पुगेको छ । सडकको ट्र्याक खुलेको जस्तोसुकै स्थानमा पनि मोटरसाइकल पुग्न सक्ने भएका कारण नेपालभर यसको माग छ । ग्रामीणस्तरमा अहिले मोटरसाइकलको प्रयोग स्थानीय व्यापारी, किसान तथा शिक्षकले गर्ने गर्छन् । सडकसँगै विकास पनि जोडिएर आउँछ । किसानले आफ्नो उत्पादन मोटरसाइकल प्रयोग गरेर तुरुन्त बजारमा पु¥याउन पाएका छन् । त्यस्तै डाक्टर, इञ्जिनीयर, शिक्षकलगायत पेशाकर्मीले आफ्नो सेवा दुर्गम स्थानमा पुर्‍याउन सजिलो भएको छ । तर, सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालमा मोटरसाइकल विश्वमै सबैभन्दा बढी मूल्यमा खरीद गर्नुपर्छ ।
मोटरसाइकलको बजार उपत्यकामा मात्र छ भन्ने सरकारी सोचाइले अझै पनि सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । अहिले नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । यही साधनको भरले त्यस स्थानका बासिन्दाहरूको आर्थिक उन्नति पनि भइरहेको छ । त्यसैले, सरकारले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा मोटरसाइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसले शहरी क्षेत्रका सडक दस्तुरमा वृद्धि गरेर भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा घटाउनुपर्छ । साथै, आयात कर कम गरेर किसानहरूको पहुँचमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाजस्ता क्षेत्रमा सडक कर बढी लिने र ग्रामीण क्षेत्रमा कम लिने दोहोरो करनीति निर्धारण गर्न सकिन्छ । आयातबाट उठाउने राजस्व सरकारले सडक करबाट उठाउन सक्छ । वास्तवमा मोटरसाइकलले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकासेको छ ।
नेपाली बजारमा बजाजका उत्पादनमध्ये पल्सरको विक्री बढी हुनुको कारण के हो ?
बजाज कम्पनीको पल्सर नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गुड्ने मोटरसाइकल हो । क्षमता, सर्भिस तथा सेवाको उपलब्धताले गर्दा यसलाई सबैले मन पराएका हुन् । हामीले शुरुआतदेखि नै सेवालाई प्राथमिकता दिएका छौं । हाम्रो मोटरसाइकल पुगेको सबै स्थानमा हामीले गुणस्तरीय सर्भिस सेण्टर पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । सोहीकारण हामीले सम्भवतः नेपालकै उच्चस्थान जोमसोममा पनि सर्भिस सेण्टर सञ्चालन गरेका हौं । बजाजका हरेक सर्भिस सेण्टरमा कम्पनीबाट तालीमप्राप्त दक्ष जनशक्ति रहेका छन् । त्यस्तै हरेक समय कम्पनीका स्पेयर पार्ट्स कम्पनी र डिलर गरेर ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको स्टोर नै रहन्छ । नेपालका सबै स्थानमा एउटै शुल्कमा स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउँछौं । हाम्रा स्पेयर पार्ट्स गुणस्तरीय भएर पनि सबैभन्दा सस्ता र सर्वसुलभ छन् । हरेक सर्भिसको मूल्य पनि सर्भिस सेण्टरमा सबैले देख्ने स्थानमा राखिएको छ । त्यस्तै डिलरहरूको सेवा, क्षमतालगायत कारणले पनि बजाजको बजार बढेको हो ।
समग्रमा अहिले मोटरसाइकलको विक्री घटेको छ, यसको कारण के हो ?
अहिले मोटरसाइकलको बजार घटेको म मान्दिनँ । २ वर्षअघि रियल इस्टेटका कारण नेपालको अटो व्यवसाय उच्च थियो । त्यो समयलाई हेर्दा भने अहिलेको बजार पक्कै घटेको हो । तर, विगत १० वर्षदेखिको मोटरसाइकलको विक्रीदर हेर्दा भने निरन्तर बढेको नै छ । नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्दो छ र युवाहरूले विदेशबाट फर्किएपछि आफ्ना लागि पहिलो सवारीसाधनका रूपमा मोटरसाइकल नै रोज्ने गरेका छन् । हरेक युवाको पहिलो चाहना मोटरसाइकल बन्दै गएको अवस्थामा नेपालमा यसको बजार अझ बढ्ने निश्चित छ ।
आपराधिक गतिविधिमा बढी प्रयोग भएको भन्दै पल्सर सवारीधनीलाई प्रहरीले बढी दुःख दिने गर्छन्, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
आपराधिक गतिविधि गर्ने भनेको मोटरसाइकलले नभई व्यक्तिले हो । चालक जो पनि हुन सक्छ । व्यक्तिले कुनै प्रयोजनका लागि पल्सर प्रयोग गर्छन् भने त्यसमा कम्पनीले के नै गर्न सक्छ र ? पल्सर ब्राण्डको बढ्दो बजारका कारण यस्तो नकारात्मक हल्ला हाम्रा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले फिँजाएको हुन सक्छ । पल्सर मोटरसाइकल नेपालका लागि सबैभन्दा उत्तम र क्षमतायुक्त छ ।
चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन मुस्ताङ एसेम्बल गरिसकेको गोल्छाले दुईपाङ्ग्रेमा त्यस्तो सोच बनाएको छैन ?
नेपालमा मोटरसाइकलको बजार ठूलो छ । कर जोगाउनका लागि मात्र मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्देश्यले उद्योग आएमा धेरै टिक्न सक्दैन । नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दा देशलाई के फाइदा हुन्छ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । पूर्णस्वचालित मेशिनको प्रयोग हुने गरी उद्योग खुलेमा त्यस्तो उद्योगले खासै रोजगारी दिन सक्दैन । मुलुकलाई योगदान दिन नसक्ने उद्योगको खासै महत्व रहँदैन । तर पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बलको सम्भावना छ ।